Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo 23kii Bishan oo Weeraro Balaadhan Lagu Qaaday Cadawga
Wararka aan kahelayno Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo aad ubadan oo ay ciidanka CWXO ku qaadeen ciidamada gumaysiga eek u sigan gudaha Ogadenya. Dagaaladan ayaa u qaybsanaa dagaaladii joogtada ahaa iyo weeraro qorshaysan oo ay CWXO ku qaadeen faadhiisimo ay ciidankan cadawgu Ogadenia kuleeyihiin kuwaasoo dhibaatooyin u gaysta dadka shacabka ah. sida aad ku arki doontaan warbixinta 23ka Bishan ayay CWXO ku qaadeen ciidamada cadawga weeraro meela badan ka dhacay oo cadawga khasaare laxaadleh lagu gaadhsiiyay. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa u dhacay sidan;
12/8/14 Dulshilin oo dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/8/14 Gasaangas oo dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan faahfaahin tiisa lahaynin.
17/8/14 Dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo weerar mir ah oo ay CWXO kuqaadeen waxay ku dileen 23 askari tiro aad ubadana way kudhaawaceen.
18/8/14 Candhofidiye oo dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob katirsan kamiin ay cwxo kaxidheen waxaa soogalay ciidan lug ah oo uu gumaysigu leeyahay waxaana qudha lagaga jaray 14 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/8/14 Caado oo Gobolka Doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 5 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/8/14 Qulqul oo dagmada Iimaybari katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/8/14 Yucub oo dagmada Wardheer katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dhaawacay 5 askari. Dhanka kale CWXO ayaa 23 bishan fuliyay dagaalo qorshaysan oo aad ubadan waxaana dagaalka qorsheeyay taliska guud ee CWXO waxaana weeraro aan wali lafaahfaahinin lagu qaaday 9 goobood oo kamid ah
gobolada Qoraxay, Nogob iyo Jarar waxayna udhaceen sidan.
23/8/14 Bashuuro oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin. Isla 23 bisha Qoofalay oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka
gumaysiga loogu gaystay khasaare aan lasoo faahfaahinin.
Sidoo kale 23 bisha Dheemaha oo dagmada Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Isla taariikhdaas waa 23ka bishan Dhagaxdhaal oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Sidoo kale 23/8/14 Duumaale oo dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay katirsan weerar qorshaysan oo ay CWXO ku qaadeen waxay ciidanka Wayaanaha ku gaadhsiiyeen khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.
Isla 23kii bisha Shabeelay oo dagmada Qabridahare ee xarunta u ah Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin. Isla taariikhdaas waa 23dii Iskudhoonlay oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Sidoo kale taariikhda 23/8/14 waxaa Dhuure oo Qabridahare katirsan weerar ay CWXO ku qaadeen ciidanka cadawga ku gaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Isla taariikhdaa 23/8/14 Dagmada Dhagaxmadow oo Gobolka Jarar katirsan weerar qorshaysan oo ay CWXO kuqaadeen waxay ciidanka gumaysiga u gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa balan qaaday in ay si dagdag ah dagaaladaas dhacay 23ka bishan faahfaahin uga keeni doonaan hadii Alle idmo.